Manaova betsaka amin'ireo zavatra 30 araka izay azo atao hanatsarana ny fiainanao - Blog
Manaova betsaka amin'ireo zavatra 30 araka izay azo atao hanatsarana ny fiainanao
Isika olombelona dia tena tia manamboatra be loatra ny fiainantsika.
Tsy manao zavatra mora ho an'ny tenantsika velively izahay.
Ary na dia te-ho sambatra daholo aza isika dia manao zavatra isan'andro izay manakana antsika tsy hahatratra izany fanjakana sarotra idirana izany.
Manangona zavatra maro hatrany amin'ny takelaka misy antsika isika, mieritreritra fa raha miasa mafy isika ankehitriny ary mahatratra ny X, Y, ary Z dia ho tsara kokoa ny fiainantsika amin'ny ho avy.
Fa ny zava-misy masiaka dia ny zavatra ezahantsika tratrarina angamba tsy hahasambatra antsika araka ny eritreretintsika.
Na dia miharihary aza fa zava-dehibe ny hakingan-tsaina ary hanana drafitra ho avy, tsy misy antony tokony hampahory eto sy izao.
Rehefa dinihina tokoa, io fotoana io ihany no ananantsika.
Tsy fantatsika velively izay miandry antsika eo an-joron-trano na firy taona no sisa tavela eto amin'ity planeta kanto ity, noho izany dia mila ataontsika izay hahafinaritra antsika indrindra ny fiainantsika isan'andro.
Ny vaovao tsara dia misy zavatra kely sy tsotra azonao atao hanatsarana ny fiainanao.
mpitaingina matoatoa izao tontolo izao mahagaga
Fomba hanehoana fanajana tena amin'ny tenanao, hampisondrotra ny fiainanao tsara, hanampiana ireo manodidina anao, ary hanome fotoana anao hiaina ny fiainanao tsara indrindra.
Ianao irery no tena mahalala izay fanovana tokony hataonao amin'ny fiainanao, fa ireto sosokevitra ireto dia mety ho toerana tsara hanombohana.
1. Araraoty ny olona mampidina anao.
Fantatrao fa olona iray ao amin'ny Facebook izay tsy mitsahatra mitaraina, ilay olona ao amin'ny Twitter izay miady hevitra aminao foana, na ilay influencer Instagram tonga lafatra izay mahatonga anao hahatsapa ho mahatsiravina ny tenanao?
Sokafy izao ny telefaoninao - izao dia izao - ary esory ny fanarahana azy ireo. Tsy mila an'izany amin'ny fiainanao ianao.
2. Ataovy falifaly ny fahatanoranao ara-tsosialy fa toerana manaitaitra.
Raha vantany vao vita ny fanarahana ireo fitaomana ratsy ireo dia tonga ny fotoana hitadiavana ireo zavatra tsara.
Mikaroha manodidina ary jereo raha afaka mahita influencers sasany izay manao zavatra tena azonao atao ianao.
Araho ny fikambanana mpanao asa soa, mpanao fampielezan-kevitra ary olona miady amin'ny fitoviana, maharitra, manatsara ny vatana, na inona izany na inona.
Hamarino tsara fa mahazo fifangaroana lahatsoratra tsara ianao izay hampisondrotra ny toe-tsainao na ny fatokisanao, ary ireo lahatsoratra izay hanome aingam-panahy anao hanao tsara kokoa, na manaova soa eto amin'izao tontolo izao .
3. Fero ny fotoana ao amin'ny media sosialy.
Satria satria toerana tsara izao ny fahana amin'ny haino aman-jery sosialy, tsy midika izany fa tokony handany fotoana hamakivakiana azy ireo ianao.
Fotoana izao hanombohana mieritreritra ny media sosialy ho mitovy amin'ny fihinanana sakafo voahodina, na fahazarana tsy mahasalama amin'ny ankapobeny.
Na dia tsara aza ny mankafy sakafo matavy na mamy indraindray, amin'ny antonony, raha mihinana azy ireo mandritra ny sakafo telo isan'andro, isan'andro, dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamanao ara-batana izany.
Toy izany koa, mieritrereta ny haino aman-jery sosialy ho zavatra tsy maintsy ankafizina amin'ny antonony mba hisorohana izany tsy hanimba ny fahasalamanao.
4. Atsaharo ny fiarahana amin'ny olona mampidina anao, na mitazona anao.
Ny media sosialy dia ampahany lehibe amin'ny fiainantsika ankehitriny, fa ny olona andanianao ara-batana ny fotoanao dia manan-danja kokoa.
Na tena tokony ho izy ireo.
Raha misy olona mitaona ny ratsy eo amin'ny fiainanao, ary mandresy anao hatrany, na manakana anao tsy hahatsapa ny mety ho vitanao, ary ny ezaka ataonao hiresahana azy ireo miaraka aminy dia efa ren'ny sofina marenina, avy eo maka fanapahan-kevitra am-pahatapahana handany fotoana kely kokoa amin'ny izy ireo.
Tsy tokony handao ny namanao ianao raha mandalo sombin-javatra maranitra izy ireo, saingy azo antoka fa hevitra tsara ny hamerenanao ny haben'ny fotoana natokanao ho an'ireo olona izay misy vokany ratsy eo aminao hatrany.
5. Lazao hoe tsia.
Raha toa ka ny mody nataonao default dia ny hoe eny amin'ny zavatra rehetra satria tsy te handiso fanantenana ny rehetra ianao na mijaly amin'ny FOMO lehibe dia tonga ny fotoana hanombohana hiteny tsia.
Amin'ity herinandro ity, lazao fa tsia farafaharatsiny zavatra iray izay tsy anananao fotoana hanaovana tsara azy.
Na, milaza tsy misy zavatra iray izay, ao am-ponao, tsy tianao atao izany.
Avy eo, manomboka manangana ny oronao.
Aza mandà fotsiny ny zava-drehetra ho tombontsoany, fa kosa aza mitenena amin'ireo zavatra sahirana loatra ianao manolo-tena, na tsy mientanentana.
6. Lazao hoe eny.
Etsy ankilany, raha ny maody fanaonao no milaza fa tsia ny manandrana zava-baovao, mifanena amin'ny olom-baovao, na mivoaka miaraka amin'ny namanao, dia ny fanombohana miteny hoe eny dia mety hitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao.
Roahy hiala amin'izany faritra mampionona izany ianao. Mandehana mivezivezy sy mifanerasera amin'ny olona. Raiso ny fahafaha-manao.
7. Misotroa tsiranoka ampy.
Ny sasany amin'ireo olana mahazo anao dia mety hidina amin'ny zavatra tsotra toy ny tsy ampy rano.
Ny ankamaroantsika dia tsy misotro zavatra toy ny tsiranoka ampy isan'andro. Misotroa rano vera iray voalohany amin'ny maraina ary misotroa bebe kokoa mandritra ny andro.
Ny dite herbal dia fomba iray lehibe hidirana ao aminao koa.
8. Sahy ny vatanao.
Tahaka ny fieritreretanao fa ny sakafo mamy, masira, na matavy dia mampionona sy mampitony anao, izay iantsoan'ny vatanao ny voankazo sy legioma vaovao.
Ny famelomana ny vatanao amin'ny sakafo voajanahary sy voajanahary dia fomba iray azo antoka hanamafisana ny tenanao.
Tsy ho mosarena salady skimpy velively ianao, fa apetaho amin'ny fangaro maro loko ny loviao.
Aza adino ny mihinana anana maitso anao, ary maro amin'izy ireo.
9. Aza mandà tsy tapaka ny tenanao ho sakafo ‘ratsy’.
Ny voankazo sy ny legioma vaovao dia tokony hanana ampahany tsara amin'ny sakafonao, fa tsy mila tsy tapaka mandà ny tenanao ny sakafo rehetra izay nampianarina anao hahita hoe ‘ratsy’ na ‘maditra.’
Ny fametrahana fandraràna lamba firakotra amin'ny sakafo tianao rehetra dia hahasosotra anao fotsiny.
Hamarino tsara fa mitsabo tena foana ianao indraindray nefa tsy mahatsiaro tena ho meloka, ary tena mankafy ny tsiro rehefa manao izany.
10. Mandany fotoana amin'ny biby.
Fianarana maro nanatsoaka hevitra fa ny olona manana biby fiompy dia sambatra kokoa noho ireo izay tsy.
Raha manana namana volo ianao, dia miezaha handany fotoana bebe kokoa miaraka amin'izy ireo. Ny fikapohana biby fotsiny dia mety hampiala sasatra.
Raha tsy manana biby fiompy ianao, dia tsy fialan-tsasatra hivoahana sy haka izany. Inona moa fa andraikitra lehibe ny fananana biby?
Fa raha mitady alika foana ianao ary nametraka azy, ary fantatrao fa afaka manome biby mila fananganana trano tsara ianao, dia azonao atao ny manomboka mandinika azy io.
Fa tsy mila ny biby fiompinao manokana ianao handany fotoana amin'ny biby. Manolora fiambenana ny alika sakaizanao, na trano hipetraha ho an'ny sakaiza miaraka amin'ny biby amin'ny fialantsasatrao manaraka.
ny fomba hiatrehana ny heloka fitsangatsanganana
11. Mandany fotoana any ivelany.
Ny olombelona dia tsy natao hiaina an-tanàna. Mialà amin'ny tanàna sy mankeny ambanivohitra.
Henoy ny feo, ankafizo ny loko, ary tsapao ny hoditrao na ny masoandro amin'ny hoditrao.
12. Mandany fotoana samirery.
Ity dia azonao ampifangaroana amin'ilay teboka teo aloha, fa na aiza na aiza andanianao fotoana irery dia alao antoka fa ataonao tsara ny fotoana.
Indraindray, mila ny toerantsika manokana fotsiny isika hipetrahana sy haka ny zava-drehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika.
Mitazà tena amin'ny takariva iray, miaraka amin'ny sarontava tarehy sy sarimihetsika tianao indrindra.
Mametraha fialan-tsasatra irery ho anao. Raiso am-pivarotana irery ny tenanao. Mandehana amin'ny sinema.
Ny fandaniana fotoana irery dia afaka manampy anao hifandray amin'ny fihetseham-ponao, ary hahazo mazava kokoa momba ireo zavatra efa nataonao tamin'ny fiainanao.
Ahinjiro ireo hozatra ireo. Kitiho ny rantsan-tongotrao. Na manandrama hikasika ny rantsan-tongotrao. Miverena mifandraika amin'ny vatanao, ary esory ny sasany amin'ireo fihenjanana miorina.
Tsy maninona izay endrika fanatanjahan-tena ataonao, ny fampiakarana ny fitempon'ny fonao dia hampilamina anao hatrany.
Milomano, mihazakazaka, mandeha, mandihiza, mandingana, mihanika, na manao zavatra fotsiny izay hahatonga anao ho mavitrika tianao.
Tsy hanenenanao mihitsy ny fanazaran-tena iray, fa mety hanenina ianao raha tsy nanao an'izany.
15. Mandehana matory aloha.
Mety tsy ampy torimaso ianao. Ny fandehanana hatory aloha kely fotsiny dia mety hisy fiovana lehibe amin'ny kalitaon'ny fiainanao.
Betsaka ny tombony azo amin'ny torimaso tsara, ao anatin'izany ny fananana angovo bebe kokoa, tsy dia alaim-panahy amin'ny sakafo tsy mahasalama, ary ny toe-tsaina tsara kokoa.
16. Ahenao ny fampiasanao plastika.
Te hahatsapa ho tsara kokoa momba ny tenanao sy ny fanjakan'ny planeta?
Atombohy ny ataonao mba hialana amin'ny onjam-plastika amin'ny fitadiavana fomba hampihenana ny fampiasana plastika anao.
Ratsy ho an'ny planeta ny plastika ary ratsy ho antsika izy ireo, ary ny isan-jatony kely amin'izy ireo ihany no tena voaverina, ka manomboha mametraka ny herinao hampihena ny habetsaky ny plastika tokana ampiasaina amin'ny fiainanao.
Ny fananana entana be loatra dia mety handratra olona tokoa. Afaho ny tenanao amin'ny fanesorana ireo zavatra rehetra tsy ilainao fotsiny.
mpiady mahery indrindra 10 mahery izahay
Na ny fanomezana kitapo kitapo akanjo tsy ilaina fotsiny aza dia hanafoana toerana kely amin'ny fiainanao.
18. Miantso namana.
Ny fiainana dia mifandraika amin'ny fifandraisana misy amintsika mpiara-belona amintsika. Saingy adinontsika izany indraindray, ary tsy miraharaha ireo olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika isika.
Miantso namana. Miantso havana. Antsoy ny reninao.
19. Derao ny namana.
Rehefa manaraka ny hevitrao fa misy olona mijery tena tsara na nahavita asa tsara tamin'ny zavatra iray dia lazao azy fotsiny.
Hahatonga ny androny io, ary ny fahalalana izany dia hahatsapa ho tsara kokoa koa ianao.
20. Mianara zavatra.
Rehefa mihalehibe isika dia mijanona matetika amin'ny fianatsika. Saingy eo amin'ny toetrantsika ny maniry foana ny hianatra sy handray vaovao vaovao, raha tsy izany dia mankaleo isika.
Noho izany, mividiana boky ho anao amin'ny lohahevitra efa nahaliana anao.
Midira amin'ny fampianarana an-tserasera, na koa amin'ny taranja hariva.
Na teôria rehetra io na mianatra zavatra azo ampiharina ianao dia hahazo fahatsapana fahafaham-po mahafinaritra amin'ny fanitarana ny fahalalanao.
21. Manaova fankasitrahana.
Ny fifantohana amin'ireo zavatra ankasitrahanao dia afaka manova ny fomba fisainanao, na inona na inona nataonao.
Andramo ny manoratra ireo zavatra telo izay tena mankasitraka anao anio, na amin'ny ankapobeny.
Mifantoha amin'ny zavatra rehetra anananao Aza manana, ary hihena ny ahiahy rehetra momba izay tsy anananao.
22. Mamelà olona.
Raha mitana lolompo amin'ny olona iray ianao, ny tena olona mijaly dia ianao.
Mamela olona tsy midika izany fa mila manadino ireo zavatra nitranga ianao, fa midika izany fa azonao atao ny mametraka azy ireo ao aorianao ary mamadika ravina vaovao.
2. 3. Mamelà ny helokao.
Raha efa nokapohinao ny tenanao noho ny zavatra nataonao na tsy nataonao dia tonga ny fotoana famelana azy.
Ekeo fa tsy afaka manova ny lasa ianao, fantaro izay nianaranao tamin'ny hadisoanao, ary manomboka ho tsara fanahy kokoa amin'ny tenanao ianao.
24. Manaova zavatra tsara.
Raha ianao very finoana ny zanak'olombelona , mila fampahatsiahivana ianao fa misy tsara eto amin'izao tontolo izao, ary mety ho izany fampahatsiahivana izany ianao.
ny fomba hijoroako ho ahy
Manaova fihetsika feno hatsaram-panahy ho an'ny olona iray. Tsy misy fahatsapana tsara kokoa.
Ny asa soa iray dia saika mitarika mankany amin'ny iray hafa foana, noho izany dia ho fantatrao fa nametraka rojom-pahasoavana ianao, izay tokony ho fampiononana na dia amin'ny andro maizina indrindra aza.
25. Raiso ny làlana avo.
Amin'ny manaraka miditra amin'ny tsy fitovian-kevitra amin'ny olona iray ianao, na manokana na matihanina, dia aza alaim-panahy hanao dona ambany.
Raiso ny arabe, ary atelina ny avonavonanao, fa aza mifamaly amin'ny zavatra tena tsy mendrika.
26. Atombohy ny fikarohana asa.
Raha tsy faly ianao na tsy tontosa amin'ny matihanina dia manaova zavatra momba izany.
Manomboha mitady asa izay tena mahaliana anao.
Azo antoka fa tsy afaka manana asa tena mahaliana daholo isika rehetra, fa tokony samy afaka mankafy ny zavatra ataontsika isan'andro isika ary mahita fahafaham-po amin'izany amin'ny fombantsika manokana.
Atombohy ny famoahana ireo mpitsapa ho an'ny asa vaovao, miadana nefa azo antoka, na manomboka mieritreritra safidy hafa, toy ny asa tena.
27. Vakio ny vaovao.
Ny famakiana vaovao dia mety ho fomba tena tsotra nefa mahomby amin'ny fametrahana ny fiainantsika amin'ny fomba fijery.
Na inona na inona mitranga, ny zava-misy hoe mamaky an'io ianao dia midika fa tsara lavitra noho ny olona maro eto ambonin'ny planeta ianao.
Fa aza mijery fotsiny ny vaovao ratsy, na tsy hahatsapa ho tsara kokoa noho izany ianao. Miezaha mitady hevitra vaovao tsara koa hampatsiahivana anao fa misy olona mahafinaritra any, ary misy foana ny fanantenana.
28. Manomboha boky tsara.
Fantatrao ve izany fahatsapana ho variana tanteraka anaty boky tsara izany nefa tsy afaka mametraka azy?
Iray amin'ireo fifaliana lehibe indrindra amin'ny fiainana io.
Raha tia mamaky ianao nefa tsy nanokana fotoana ho azy tato ho ato dia apetraho amin'ny tanana fantatrao fa ho tianao ny tananao.
29. Mitondrà tena amin'izay zavatra tadiavinao.
Na dia tsy tokony hiankina amin'ny zavatra ara-nofo aza ny fahasambarantsika, dia tsy azo lavina fa indraindray ireo zavatra izay novidintsika dia manatsara ny fiainantsika na mampitombo ny fahasambarantsika.
Aza atao izany amin'ny fientanam-po amin'ny fividianana zavatra avy vao nongotanao ny lalamby tao amin'ny fivarotana…
… Ataovy amin'ny fahatsapana fa mividy farany ilay zavatra iray izay efa nijerinao nandritra ny volana maro, na angamba taona maro aza.
Ataovy ho zavatra fantatrao fa hampiasainao amin'ny fotoana rehetra izany.
30. Lazao amin'ny olona tianao izy ireo.
Na iza na iza tsapanao ny fitiavana, na namana, mpianakavy, na mpiara-miasa dia lazao azy ireo fotsiny. Tsotra toa izany.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanatsarana ny fiainanao? Te hanana torohevitra manokana? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Laharam-pahamehana 7 amin'ny fiainana izay tokony hatao loha laharana
lisitry ny ekipa tagy wwe
xfl 30 ho an'ny datin'ny rivotra 30
tsapako fa tsy tia ahy ny sipako